सर्वोच्च अदालतले के गर्यो त्यस्तो जसका कारण उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ ? « Light Nepal
सर्वोच्च अदालतले के गर्यो त्यस्तो जसका कारण उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ ?
Published On : 14 January, 2018 10:52 am
काठमाडौं – चार महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ । गत २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको हो । विस्तार भइरहेका सडक दायाँबायाँका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।